Cebisa ukusebenzisa imaski elahliweyo ngcono! Eyona mpazamo inkulu: i-gauze mask njengokusebenzisa uthuli lomaski. Ukusukela ngonyaka ka-2000, ikhomishini yangaphambili yezoqoqosho nezorhwebo echazwe kuqoqosho lukazwelonke kunye nokhuseleko kwezorhwebo  ukuba imaski yokulinganisa akufuneki isetyenziswe njengeemaski ezinothuli.
Iimaski zeGauze ziqhele ukusetyenziswa ukuthintela uthuli kwixesha lasemva lobuchwepheshe bokukhusela ukusebenza kweTshayina, kodwa kwiminyaka yakutshanje, kunye nenkqubela phambili yemigangatho yokukhuselwa kweTshayina, itekhnoloji yokufumanisa kunye netekhnoloji yokwenza, kunye nokukhula ngokubanzi kolwazi lokukhuselwa kwezenhlalo, ngokucacileyo qaphela ukusebenza okuncinci kwe-gauze.
Ngexesha le-SARS ngo-2003, ngenxa yendlela engalunganga, abasebenzi bezonyango basebenzise imaski yokuzikhusela, nto leyo yabangela inani elikhulu labasebenzi bezonyango ukuba bosuleleke ngenxa yokhuselo olungafanelekanga. Ngoku nangona ukusuka kumgangatho, imithetho kunye nemigaqo kwi-gauze masks sele igqityiwe, kodwa ukusetyenziswa kwexesha elide kwee-masks ze-gauze, kodwa uninzi lwembono yokukhusela okungalunganga oluqulunqiweyo, njengokugxininisa ngakumbi kwixabiso eliphantsi, kufuneka lubambe ukubila, kufanelekile hlamba kwaye uphefumle "izibonelelo", kodwa unganikeli ingqalelo kubunzulu, ifilitha esebenzayo kunye nezinye iziphumo ezifanelekileyo zokhuselo.